FAQ अभिलेखालय - प्रेरण हीटिंग मिसिन निर्माता | प्रेरण हीटिंग समाधान
प्रेरण गर्मी उपचार सतह प्रक्रिया के हो? प्रेरण तताउने एक गर्मी उपचार प्रक्रिया हो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा द्वारा धातुको धेरै लक्षित तापन को अनुमति दिन्छ। प्रक्रिया गर्मी उत्पादन गर्न सामग्री भित्र प्रेरित बिजुली प्रवाहमा निर्भर गर्दछ र बोन्ड, कडा वा नरम धातु वा अन्य प्रवाहकीय सामग्रीहरूको लागि प्रयोग गरिने रुचाइएको विधि हो। आधुनिकमा ... थप पढ्नुहोस्
विभाग सोधिने प्रश्न, टेक्नोलजीज ट्याग गर्मी उपचार, गर्मी उपचार प्रेरण, गर्मी उपचार सेवा, तातो उपचार, तताउने उपचार, HF गर्मी उपचार, उच्च आवृत्ति गर्मी उपचार, उच्च आवृत्ति गर्मी उपचार, उत्प्रेरित गर्मी उपचार, प्रेरणा गर्मी उपचार प्रक्रिया, सतह गर्मी उपचार, सतह तताउने उपचार
प्रेरणा ब्रेकिंग मूल बातें
तांबे, चाँदी, टाढो, इस्पात र स्टेनलेस स्टील, आदि को संयुक्त गर्न प्रेरणा ब्रेकिंग मूल बातें।
प्रेरण ब्राजिंगले धातुहरूमा सामेल हुनको लागि ताप र फिलर धातु प्रयोग गर्दछ। एक पटक पिघलिए पछि फिलर केशिका-कार्यद्वारा क्लोज-फिटिंग बेस धातुहरू (जोडिएका टुक्राहरू) बीचमा बग्दछ। पग्लिएको फिलरले आधार धातुको पातलो तहसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, मजबूत, चुहावट प्रूफ संयुक्त। ब्राजिंगका लागि विभिन्न ताप स्रोतहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ: प्रेरणा र प्रतिरोध हीटर, ओभन, फर्नेस, मशाल, आदि। त्यहाँ तीन साधारण ब्रेजिंग विधिहरू छन्: केशिका, नच र मोल्डिंग। प्रेरण ब्रेजि यी मध्ये पहिलो संग सम्बन्धित छ। आधार धातुहरू बीच सही अन्तर हुनु महत्त्वपूर्ण छ। धेरै ठूलो अन्तरले केशिका बललाई न्यूनतम गर्न सक्छ र कमजोर जोड्ने र धमकी हुन सक्छ। तापीय विस्तारको अर्थ खालीपनलाई धातुको लागि गणना गर्नु पर्छ ब्राजिंगमा, कोठा होइन तर तापक्रममा। इष्टतम स्पेसिंग ०.०0.05 मिमी - ०.१ मिमी। तपाईंले ब्रेज गर्नु अघि ब्राजिंग समस्या-रहित छ। तर केहि प्रश्नहरू अनुसन्धान गरिनु पर्दछ - र उत्तर दिइयो - सफल, लागत प्रभावीमा सामेल हुने आश्वासनको लागि। उदाहरण को लागी: ब्राजिंग को लागी आधार धातुहरु कती उपयुक्त छन्; केहि खास समय र गुणस्तरको मागको लागि सबै भन्दा राम्रो कोइल डिजाइन के हो; ब्राजिंग म्यानुअल वा स्वचालित हुनुपर्छ?
DAWEI प्रेरणमा हामी यी र अन्य मुख्य बुँदाहरू ब्रेजि solution समाधान सुझाव अघि जवाफ दिन्छौं। फ्लक्स बेस धातुहरूमा फोकस सामान्यतया फ्लजको रूपमा चिनिने घोलकसँग लेपित हुनुपर्दछ तिनीहरू ब्रेज हुनु अघि। फ्लक्सले बेस धातुहरू सफा गर्छ, नयाँ अक्सिडेशन रोक्छ, र ब्रेजि prior्ग गर्नु भन्दा पहिले ब्रेजि area क्षेत्र। पर्याप्त फ्लक्स लागू गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ; धेरै थोरै र फ्लक्स बन्न सक्छ
अक्साइडका साथ संतृप्त र यसको आधार धातुलाई रक्षा गर्न यसको क्षमता हराउँछ। फ्लक्स सधैं आवश्यक हुँदैन। फस्फोरस-असर फिलर
तामा मिश्र, ब्रास र कांस्य काँसा प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्ल्याक्स-फ्री ब्रेजिंग सक्रिय वायुमंडल र वैक्यूमको साथ पनि सम्भव छ, तर ब्रेजि then्ग त्यसपछि नियन्त्रणको वातावरणको कक्षमा गर्नुपर्नेछ। एक पटक धातु पूरक ठोस भएपछि फ्लक्स सामान्य रूपमा भागबाट हटाउनुपर्नेछ। विभिन्न हटाउने विधिहरू प्रयोग गरिन्छ, सबै भन्दा आम पानी क्वेन्चिंग, अचार र तार ब्रशिंग।
विभाग सोधिने प्रश्न ट्याग उच्च फ्रिक्वेन्सी चोरी, igbt प्रेरण टांकना, प्रेरणा ब्रेकिंग मूल बातें, प्रेरणा टाँसिने क्यान्सर, त्यसो भएन, बिरुवाको सिद्धान्त
किन ईन्टरनेट ब्राजिंग रोज्नुहोस्?
प्रेरण हीटिंग टेक्नोलोजी स्थिर ब्राजिंगमा मनपर्दो तातो स्रोतको रूपमा खुला आगो र ओभन विस्थापन गर्दैछ। सात मुख्य कारणहरूले यस बढ्दो लोकप्रियतालाई वर्णन गर्दछ:
1। गति समाधान
प्रेरण हीटिंग खुला फलाम भन्दा प्रति वर्ग मिलिमीटर अधिक ऊर्जा स्थानान्तरण गर्दछ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, प्रेरणले वैकल्पिक प्रक्रियाहरू भन्दा प्रति घण्टा बढी भागहरू ब्राज गर्न सक्दछ।
2। द्रुत माध्यम
प्रेरणा इन-लाइन एकीकरणको लागि आदर्श हो। भागहरूका ब्याचहरू अब टाढा राख्न वा ब्राजिंगको लागि बाहिर पठाउन आवश्यक पर्दैन। इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण र अनुकूलित कुण्डले हामीलाई ब्रेजिंग प्रक्रिया सिमलेस उत्पादन प्रक्रियामा एकीकृत गरौं।
प्रेरण हीटिंग नियन्त्रण योग्य र दोहोरिने योग्य छ। इन्डक्शन उपकरणमा तपाईंको इच्छित प्रक्रिया प्यारामिटरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, र यसले केवल नगण्य विचलनहरूको साथ हीटिंग चक्र दोहोर्‍याउनेछ।
4. अद्वितीय नियन्त्र्यता
प्रेरणले अपरेटरहरूलाई ब्राजिंग प्रक्रिया हेर्न दिन्छ, केही यस्तो ज्वालाको साथ गाह्रो छ। यो र सटीक हीटिंगले अत्यधिक तातो हुने जोखिमलाई कम गर्दछ, जसले कमजोर जोर्नीहरू निम्त्याउँछ।
खुला आगोले असहज काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ। अपरेटर मनोबल र उत्पादकत्व परिणामको रूपमा ग्रस्त छन्। प्रेरणा मौन छ। र परिवेशको तापमानमा वास्तवमा कुनै वृद्धि छैन।
6। आफ्नो ठाउँ काम गर्न राख्नुहोस्
DAWEI प्रेरण ब्रेजि equipment उपकरणसँग एक सानो पदचिह्न छ। प्रेरण स्टेशनहरू उत्पादन कोषहरू र अवस्थित लेआउटहरूमा सजीलो स्लट गर्दछ। र हाम्रो कम्प्याक्ट, मोबाइल प्रणालीहरूले तपाईंलाई हार्ड-टु-एक्सेस पहुँच भागहरूमा काम गर्न दिन्छन्।
7। कुनै सम्पर्क प्रक्रिया छैन
प्रेरणले आधार धातुहरू भित्र ताप उत्पन्न गर्दछ - र कहिँ छैन। यो कुनै सम्पर्क प्रक्रिया हो; आधार धातुहरू आगोको सम्पर्कमा कहिल्यै आउँदैनन्। यसले बेस धातुहरूलाई रेपिंगबाट बचाउँछ, जसले फलस्वरूप उत्पादन र उत्पादको गुणस्तर बढाउँदछ।
विभाग सोधिने प्रश्न ट्याग त्यसो भएन, टाँसिने प्रेरणा, उच्च आवृत्ति प्रेरण टाँसिने, igbt प्रेरण टांकना, आरएफ ईन्चिंग ब्राजिंग, किन किनकि राम्रो छ, किन ईन्टरनेट ब्राजिंग रोज्नुहोस्?
एनिमेसन के हो?
यस प्रक्रियाले धातुहरूलाई ताप दिन्छ जुन पहिले नै महत्त्वपूर्ण प्रक्रियागत प्रक्रियामा भइरहेको छ। प्रेरण एनीनेलिंगले कठोरता कम गर्दछ, लचीलापन सुधार गर्दछ र आन्तरिक तनावबाट छुटकारा दिन्छ। पूर्ण-बडी एनेलिaling्ग एक प्रक्रिया हो जहाँ पूर्ण workpiece annealed छ। सीम एनीलिaling्गका साथ (सीम सामान्यीकरणको रूपमा थप सही रूपमा परिचित), वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित तता-प्रभावित क्षेत्रको मात्र उपचार गरिन्छ।
प्रेरण एनीलिaling्ग र सामान्यीकरणले छिटो, भरपर्दो र स्थानीयकृत ताप, सटीक तापमान नियन्त्रण, र सजिलो इन-लाइन एकीकरण प्रदान गर्दछ। प्रेरणले व्यक्तिगत workpieces लाई सहि विशिष्टतामा व्यवहार गर्दछ, नियन्त्रण प्रणालीको साथ लगातार सम्पूर्ण निगरानी र रेकर्डिंग सम्पूर्ण प्रक्रिया।
इन्डक्शन एनीलिaling्ग र सामान्यीकरण व्यापक रूपमा ट्यूब र पाइप उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। यसले तार, स्टील स्ट्रिप्स, चाकू ब्लेड र तामा ट्युबिंग पनि एनेल्स गर्दछ। वास्तवमा, प्रेरण लगभग कुनै पनि annealing कार्य को लागी आदर्श हो।
प्रत्येक DAWEI प्रेरण annealing प्रणाली विशिष्ट आवश्यकताहरु को लागी निर्माण गरीएको छ। प्रत्येक प्रणालीको मुटुमा छ
एक DAWEI प्रेरण हीटिंग जेनरेटर कि सबै शक्ति स्तरहरूमा स्वचालित लोड मिलान र एक स्थिर शक्ति कारक सुविधा। हाम्रा वितरित प्रणालीहरूमा कस्टम बिल्ट ह्यान्डलिंग र नियन्त्रण समाधानहरू पनि छन्।
विभाग सोधिने प्रश्न ट्याग annealing, उच्च आवृत्ति एनीलिंग, उच्च आवृत्ति एनेलिंग सतह, प्रेरणा, प्रेरणा ट्यूब, एनिमेसन के हो?
प्रेरणा टेम्परिंग एक हीटिंग प्रक्रिया हो जसले मेकानिकल गुणहरू अनुकूलन गर्दछ जस्तै क्रूरता र ड्युटिलिटी
कार्यपूर्तिहरूमा पहिले नै कठोर भएको छ।
फर्नेस टेम्परिंग ओभर इन्डक्शनको मुख्य फाइदा भनेको वेग हो। प्रेरणले मिनेटमा workpieces स्वाभाविक बनाउन सक्छ, कहिलेकाँही सेकेन्ड पनि। फर्नेसहरू प्रायः घण्टा लाग्छ। र किनभने प्रेरणा टेम्परिंग इनलाइन एकीकरणको लागि उत्तम छ, यसले प्रक्रियामा कम्पोनेन्ट्सको संख्या कम गर्दछ। प्रेरणा टेम्परिंगले व्यक्तिगत वर्कपीसको गुणस्तर नियन्त्रणको सुविधा पुर्‍याउँछ। एकीकृत इन्डक्शन टेम्पर स्टेशनहरूले मूल्यवान भुइँ स्थान पनि बचत गर्दछ।
इन्डक्शन टेम्परिंग व्यापक रूपमा मोटर वाहन उद्योगमा शाफ्ट, बार र जोर्नीहरू जस्ता सतह-कठोर कम्पोनेन्टहरू टेम्पर्डरमा काम गर्दछ। प्रक्रिया ट्यूब र पाइप उद्योग मा थर्के र workpieces थर्माउन प्रयोग गरीन्छ। प्रेरणा टेम्परिंग कहिलेकाँही कडा कडा स्टेशन मा प्रदर्शन गरिन्छ, कहिलेकाँही एक वा धेरै अलग टेम्पर स्टेशनहरु मा।
पूर्ण हार्डलाइन सिस्टम धेरै टेम्परिंग अनुप्रयोगहरूको लागि आदर्श हो। त्यस्ता प्रणालीको मुख्य फाइदा भनेको सख्त र टेम्परिंग एक मेशीन द्वारा गरिन्छ। यसले वैकल्पिक टेक्नोलोजीहरूको तुलनामा सानो फुटप्रिन्टमा महत्त्वपूर्ण समय र लागत बचत दिन्छ। भट्टी संग, उदाहरण को लागी, एक भट्टी प्राय: workpieces कडा गर्छ, एक अलग भट्टी संग
त्यसोभए तनावको लागि प्रयोग भइरहेको छ। ठोस राज्य DAWEI प्रेरण हीटिंग सिस्टम पनि टेम्परिंग अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग गरीन्छ।
विभाग सोधिने प्रश्न ट्याग उच्च आवृत्ति तापक्रम, प्रेरणा स्वभाव, प्रेरणा समथर सतह, आरएफ टेम्पिंग उपचार, तापनि, तापमान ताप तापन
प्रेरण ब्राजिंग र सोल्डरिंग सिद्धान्त
प्रेरण ब्रेजि & र सोल्डरिंग सिद्धान्त ब्राजिंग र सोल्डरिंग एक मिल्दो पूरक सामग्री प्रयोग गरेर समान वा भिन्न सामग्रीहरू जोड्नको लागि प्रक्रिया हो। फिलर धातुहरूले सिसा, टिन, तामा, चाँदी, निकल र उनीहरूको मिश्रहरू समावेश गर्दछ। कार्यको टुक्रा आधार सामग्रीहरूमा सामेल हुन यी प्रक्रियाहरूमा मात्र मिश्र पग्लन्छ र घनिष्ट हुन्छ। फिलर मेटल तानिएको छ… थप पढ्नुहोस्
विभाग सोधिने प्रश्न ट्याग आधारभूत ताप तापनि, प्रेरणा टाँसिने राजकुमारहरू, प्रेरणा ब्राजिल सिद्धान्त, प्रेरक सोल्डरिंग सिद्धान्तहरू